အမ်အိုင်တီကုမ္ပဏီလီမိတက် | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
၀၉ ၇၇၆ ၉၀၀ ၉၀၀ | mid@mid.com.mm
အကြီးစား စက်ပစ္စည်းကိရိယာ စီမံခန့်ခွဲမှု
- သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ
- ကုမ္ပဏီ၏ စက်ယန္တရားများ
- လူမှုရေးရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ
- ပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု
- နန်းတော် ကားအငှားဝန်ဆောင်မှု
- အကြီးစား စက်ပစ္စည်းကိရိယာ စီမံခန့်ခွဲမှု
- အကောက်ခွန် ကြေညာစာတမ်း/ရှင်းလင်းရေး
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နန်းတော် ကားအငှားအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကားငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် အကြီးစားစက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒေသတွင်းအလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကြေငြာချက်/ရှင်းလင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ပြီးချိန်မှစ၍ ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်သာမက နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် အဓိကကန်ထရိုက်တာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုများစွာအတွက် အထူးဝန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်တာအဖြစ် သက်သေပြခဲ့ပါသည်။
Company Culture & Philosophy : MID’s corporate culture is featured by its “Evergreen Principle”, which incorporate the company culture essences of mission, vision, values and etc. It not only defines our goals, but also inspires and guides our behaviors to leverage our intelligence and competence to createabrilliant and everlasting future of MID Services.
Mission : Accelerate Myanmar.
Vision : Becomeapreferred services solution provider tailored for customer.
Philosophy : Human-oriented, win-win strategy for both employees and corporate Healthy competition and optimal management system.
Values : Empower your Success – Dedicated to the total satisfaction of target customers.
Excellence of Operation : All efforts go in vain without optimal operation.
Innovation : The strong reachanew horizon to leave the weak behind.
Discerning Vision : Time will tell youatrue definition of success.
Passion & Energy : Survival of the fittest.
Slogans : Our Four Concepts, Diligence, Solidarity, Efficiency, Innovation.
Operating Philosophy : Show respect for customers and deliver customers success. Strive for the leadership beyond excellence.
ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ
မြစ်ကြီးနားပညာရေးကောလိပ်တွင် သင်တန်းသား/သူ အိပ်ဆောင် (၃) ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မြစ်ကြီးနားပညာရေးကောလိပ်တွင်
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အထက(ခွဲ)လ(၂)၊ (၃)ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(100%) တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ မြန်မာ...
မြစ်ကြီးနား နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြစ်ကြီးနား)တွင် (၃)ထပ်စာသင်ဆောင် (...
အမ်အိုင်တီ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် မြန်မာအစိုးရမှ အတည်ပြုသော မြန်မာပြည်တွင်း အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမ်အိုင်တီဂရု၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ပါ၀င်သည်။ စင်ကာပူ၊ တရုတ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့မှ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အမ်အိုင်တီသည် ဖောက်သည်များအား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပတ်၀န်းကျင်နှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများဖြင့် ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အပြည့်အ၀ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နန်းတော် ကားအငှားအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကားငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် အကြီးစားစက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒေသတွင်းအလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကြေငြာချက် / ရှင်းလင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ရုံးလိပ်စာ – အမှတ် (၁၈၃)၊ အောင်ပင်လယ်လမ်း၊ အေးစေတီရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။
ရုံးဖုန်း – (+၉၅) ၀၉ ၇၇၆ ၉၀၀ ၉၀၀
အီးမေးလ် – mid@mid.com.mm